Dalkan Itoobiya oo soo bandhigay daabacaadda waraaqo lacageed oo cusub - Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Dalkan Itoobiya oo soo bandhigay daabacaadda waraaqo lacageed oo cusub
On Sep 14, 2020 2,594
Ababa Sep 14, 2020 (Maskerem 4,2013 T.I) (FBC/SOMALI)-Ra’iisal wasaaraha JDFI DR. Abiy Axmed ayaa shaaca ka qaaday in lacagta waraaqaha ah ee haatan la isticmaalo la bedelayo.
Dawladda Itoobiya waxay maanta soo bandhigtay waraaqo cusub oo lacag ah, oo leh astaamo ammaan oo kor loo qaaday iyo waxyaabo kale oo lagu garto.
Sida uu warbintan ku sheegay xafiiska Ra’iisal wasaarahu ,lacagta la bedelayo waxa ka mid ah 10-ka,50-ka, iyo 100 -ka Birr,waxa kale oo bayaanka lagu xusay in lacag waraaq ah oo isku taalla qiimaheeduna yahay 200 Birr la soo daabici doono.
Sidoo kale waxa bayaanka lagu xusay in lacagta 5-ta Birr ay sideedii ahaan doonto in muddo ah ka dibna sunuud(senaati) lagu bedelli doono.
Dhanka kale ,ra’iisal waraasaha ayaa carrabka ku dhuftay in isbedelkaasi lagu sameeyay lacagta ay door muhiima ka qaadanayso lacag yaridii ka jirtay hay’addaha ku lug leh lacagta.
Waxa uu intaa raaciyay in lacagtan cusub daabacadeedii la dhammaystiray islamarkaana ay haatan ku jirto maqsinnada bankiga qaranka Itoobiya
Beddellida lacagta waxaa loogu talagalay in lagu soo ururiyo lacagaha ku baxaya hab aan sharciga waafaqsanayn iyo kuwa ka baxsan hay’adaha maaliyadeed, iyo in la xakameeyo musuqmaasuqa iyo koontarabaanka.
Kaaliyaha xoghayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka oo sheegay in kuwa leh…
Dowladda Itoobiya oo ruqsadii shaqada kala noqotay saddex hay’addood oo…
Dowladda Itoobiya oo ruqsadii shaqada kala noqotay saddex…
Israel oo xoojisay duqeymo ka dhan ah dalka Lubnaan
Kaaliyaha xoghayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka oo…